भाकल के हो ? के भाकल गरेपछि बुझाउनै पर्छ ? नबुझाउँदा के हुन्छ ? – Sanchar Patrika
July 6, 2020 221
भाकल देवी देवतालाई गरीने अत्यन्तै महत्वपूर्ण बाचा हो र यो पुरा गर्नै पर्दछ । किनकी भाकल गर्ने व्यक्तिले यसो गर्छु गर्दिन भनेर बाचा कसम खाएको हुन्छ । देवी देवतालाई गरिने भाकल भनेको एक गम्भीर कुरा हो भनी हाम्रो धर्म शास्त्रले बताएको छ ।
धर्मशास्त्रमा भनिएको छ कुनै मानिसले देवीदेवताको निम्ती भाकल गर्छ भने त्यो भाकल कहिले पनि भंग गर्न हुदैन । जसको मन बाट जुन कुरा निस्कीएको छ त्यो कुरा पुरा गर्नै पर्दछ ।
यही आज्ञा चक्र कमजोर भएपछि मानिसहरु धेरै कुरा सोच्न थाल्दछ आफुले गरेका कामहरु बिग्रिन थालेपछि उसले आफुले गरेको भाकलहरु सम्झन थाल्दछ र यसो हुँदा उसले भाकल बोलेको देवीदेवता सम्झन थाल्दछ । धरै सोच्दा सोच्दै उसले आफ्नो सपनामा देवी देवताहरु देख्न थाल्दछ र देवी देवताले आप्mनो कामहरु रोके भनी देवी देवतालाई नै गाली गर्न थाल्दछ ।
त्यसैले आफुले बोलेको भाकल समयमै पुरा गरी आप्mनो आज्ञा चक्रलाई कमजोर हुन नदिऔं । यहीमै आफ्नो हित हुनेछ ।
Prevमास्क नलगाई घरबाहिर निस्किए प्रहरीले पक्राउ गर्ने
Nextवैज्ञानिकहरूले गरे हावाबाट कोरोना भाइरस सर्ने दाबी, भेटे यस्ता प्रमाणहरु
तेह्रौँ गणतन्त्र दिवसको राष्ट्रपतिद्वारा शुभकामना
असोज ९ गते शनिबार, भोलिको राशीफल
राेग प्रतिराेधत्मक क्षमता बढाउन इटहरीमा गुर्जाे तरङ्ग